काठमाडौं । विक्रम संवत् २०७७ सालको दशैं र तिहार २५ दिन पर धकेलिएको छ । नयाँ पात्रोअनुसार असोज एक महिना मलमास परेकाले दुई चाडपर्व करिब एक महिना धकेलिएको हो । पञ्चाङग निर्णायक..
आइतबार सार्वजनिक बिदा दियो उपमहानगरले
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भका अवसरमा धरान उपमहानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उपमहानगरले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै भ्रमण वर्षसँगै आयोजित धरान महोत्सवका अवसरमा यही पुस २०..
अब श्रीमान श्रीमतिबीचको कुराकनी पनि गोप्य नहुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि बनेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक( २०७६ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सांसदहरुले नागरिकको स्वतन्त्रता हत्याउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक तयार पारेको भन्दै..
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा भोलि (मंगलबार) सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘तमु ल्होसार’को अवसरमा सार्वजनिक मंगलबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गुरुङ समुदायको महत्वपूर्ण पर्व तमु..
काठमाडौंको आज बिहानको तापक्रम ०.९ डिग्री, जुम्लाको तापक्रम माईनस ७ डिग्रीमा झर्‍यो
काठमाडौं । आज यो वर्षकै सबैभन्दा चिसो मापन गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान पौने ९ वजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाको न्युनतम तापक्रम ० दशमलब ९ डिग्री सेल्सियसमा..
काठमाडौं । बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले बिहीवार बिहान ८ बजेदेखि टेलिस्कोपको सहायताबाट प्रत्यक्षरुपमा सूर्यग्रहण अवलोकन गराउने भएको छ । सर्वसाधारण मानिसमा वैज्ञानिक..
भोलि बिहीबार देशैभरी सार्वजनिक विदा हुने
काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले भोलि बिहीबार देशैभरी सार्वजनिक विदा दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले भोलि विदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । भोलि बिहान नेपालसहितका देशमा खण्डग्रास..
दुःखद संयोग ! आफैंले तयार गरेको चितामा जले भट्टराई
काठमाडौं । सोमबार दिउँसो चावहिल चलचित्र विकास बोर्डको प्रांगणमा एकातर्फ बोर्ड अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिनेता केशव भट्टराईको पार्थिव शरीर थियो । अर्कोतर्फ वरिष्ठ अभिनेता दीपक क्षत्रीको पार्थिक शरीर थियो । जहाँ..
काठमाडौं । अमेरिका र चीनका बीच पहिलो चरणको व्यापार वार्तामा सहमति भएको छ। योसँगै दुई देशका बीच पछिल्लो १७ महिनादेखि जारी व्यापार युद्ध पनि तत्कालका लागि रोकिने संकेत देखिएको बताइएको..
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मङ्सिर २६ गते बिहिबार सार्वजनिक विदा नभएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले बिहिबार परेको पर्व मनाउने समुदायलाई मात्र विदा हुने र अन्यलाई विदा..
काठमाडौं । चक्रपथभित्र भोलि जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन मात्र चल्न पाउने भएका छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको समापनको दिन ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउन जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन मात्रै..
काठमाडौं । रुपन्देहीको ओमसतियामा छोराले आफ्नै आमाबुवाको हत्या गरेका छन् । ओमसतिया गाउँपालिका-४ का गोरखबहादुरले घरमै बसिरहेका ७२ वर्षीय बुवा रामनारायण यादव र ७० वर्षीया आमा थगना यादवको धारिलो हतियार प्रहार..
काठमाडौं । शनिबार अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारीसाधन नचलाउन महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। १३औँ सागमा म्याराथन शनिबार बिहान सात बजेदेखि सुरु हुँदै छ। दशरथ रंगशालाबाट सुरु हुने उक्त..
काठमाडौंमा आज विहान यो वर्षकै सवैभन्दा चिसो
काठमाडौं । चिसो बढ्दै जाने क्रममा आज शुक्रबार विहान काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम यस वर्षकै कम मापन भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार आज बिहान काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम..
टेष्ट राइडरले छ लाख ५० हजार पर्ने मोटरसाइकल गायब बनाएपछि.........
काठमाडौं । कुनै पनि ग्राहक मोटरसाइकल किन्न आउँदा अवस्था कस्तो छ भनेर ‘टेष्ट राइड’ गर्ने चलन हुन्छ । व्यवसायीले पनि बिक्रीको चाहना राखेर सजिलै ‘टेष्ट राइड’ गर्न दिन्छन् । होस पुर्‍याइएन..
टुटल र पठाओलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिनु : नेम्वाङ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री बसन्त नेम्वाङले टुटल र पठाओलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागका महार्निेशक गोगनबहादुर हमाललाई यस्तो निर्देशन..
काठमाडौं । भोलि अर्थात मंसिर १२ गते विहीवारदेखि तीन दिनसम्म सार्वजनिक विदा दिइएको छ । कास्की क्षेत्र नं २ मा आगामी मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा मतदान केन्द्र..
विश्वप्रसिद्ध संग्रहालयबाट १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बहुमूल्य गरगहना चोरी
काठमाडौं । पूर्वी जर्मनीमा रहेको विश्वप्रसिद्ध संग्रहालयबाट करिब एक अर्ब युरो बराबरको बहुमूल्य गहना चोरी भएको छ । चोरहरुले ड्रेस्डेन ग्रीन भल्टमा रहेको संग्रहालयको झ्याल फुटाएर भित्र पसी अठारौँ शताब्दीमा बनाइएका..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एपेन्डिसाइटिस भएपछि मंगलबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार सोमबार राति प्रधानमन्त्रीलाई पेट दुखेको थियो। उनी मंगलबार बिहानै महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल परिसरमा..
काठमाडौं । मेरोघर र एनएमबी बैंकले संयुक्त रूपमा ‘अब बन्छ हजुरको घर’ अफर सुरू गरेका छन् । ग्राहकलाई आवासीय घर बनाउन सहज सेवा र वित्तीय सुविधा दिने यस्तो योजना नेपालमै..
अब विदेश जाँदा ‘टु वे’ टिकट अनिवार्य, कुन देश जान के के चाहिन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले विदेश जानेहरुका लागि आवश्यक कागजपत्रहरुको सूची तयार पारेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार विद्यार्थी भिसा, भिजिट भिसा र कामदार भिसामा जानका लागि आवश्यक कागजपत्रको सूची तयार पारेको हो..
भारतीय विवाह गर्न किन सौराह आउँछन् ?
चितवन । भारतबाट विवाह गर्न सौराहा आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यो मौसममा दुलाहा दुलहीसहित सबै बन्दोबस्तीका सामान बोकेर भारतीय विवाहका लागि आउने क्रम बढेको हो । सौराहाका होटल दुईदेखि..
प्याज महंगो भएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीले नखाने
एजेन्सी । अहिले नेपाली उपभोक्ता प्याजको चर्को मूल्यले आजित छन्। दाल, तरकारीदेखि मासुसम्ममा हाल्नु पर्ने प्याजको भाउ ह्वात्तै बढेपछि आमनागरिकको भान्छा महंगिएको छ। प्याजको भाउ बढेको नेपालमामात्र भने होइन। हाम्रो नजिकैको..
इन्डोनेसियामा ७.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी
काठमाडौं । इन्डोनेसियाको मालुकु प्रान्तमा आज विहानै शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान ७।१ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । अमेरिकन भौगर्भिक सर्भेले भूकम्पको केन्द्रविन्दु मोलुसा सागरमा ७३ किलोमिटर..
काठमाडौं । १५ वर्षीया नेपाली बालिकालाई भारतमा लगेर बेचबिखन गर्ने क्रममा युवती बनाउन सुई र अन्य औषधि प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले २७ कात्तिकमा उक्त घटनाबारे..
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले सर्वोच्चमा हालेको रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उनको रिट खारेज हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका सूचना..
काठमाडौं । अबदेखि साना सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई उभ्याएर यात्रा गराउन नपाउने भएका छन्। माईक्रो बस, मिनिबस, ट्याम्पो लगायतका साना भाडाका सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने भएका हुन्। ठूला..
अब चिनले हवाईजहाज पनि विद्युतले उडाउने
एजेन्सी । चीनले पहिलो विद्युतीय जहाजको सफल परीक्षण गरेको बताएको छ। ४ सिट भएको उक्त विद्युतीय जहाजले मंगलबार पहिलो परीक्षण उडान गरेको थियो । १२ सय किलोको जहाज ८.४ मिटर लामो..
भाइटीकाको भोलिपल्ट सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले भाइटीकाको भोलिपल्ट किजा पूजाका लागि कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीवार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक..
अमेरिकी डीभी आवेदन खुल्यो, भर्ने नियम परिवर्तन, यसरी भर्न सकिन्छ
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा डीभी० २०२१ का लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार २०१९ अक्टोबर २ देखी नोभेम्बर ५ सम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ..